Dowlada Uganda oo qabatay Dhalinyaro Al-shabaab looga shakiyay | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Dowlada Uganda oo qabatay Dhalinyaro Al-shabaab looga shakiyay
written by Siid Cali 01/08/2016
Kampala(WRB)Ciidamada Booliska dalka Uganda ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 2 ruux oo Soomaali ah oo la tuhunsan yahay in ay xiriir la leeyihiin Al-Shabaabka Soomaaliya ka dagaalama.
War ay Booliska Uganda soo saareen ayaa lagu sheegay in cidamadu qabteen 2 ruux oo Soomaali ah kuwaas oo sida la sheegay ka yimid gobolka Jubba ee dalka Sudan oo doonayay in ay galaan gudaha dalka Uganda.
Dhalinyaradan ayaa lagu qabtay magaalada Pakwach oo xaduuda wadamada Sudan iyo Uganda ku taala.
Taliyaha ciidamada degmada muwaadiniintan lagu qabtay ee Nebbi oo lagu magacabo Alex Wabire ayaa u sheegay warbahinta Uganda in 2-da ruux ee Soomaalida ah in ay doonayeen in dalkaasi ay ku galaan sharci daro waxaana uu xusay in ay uga shakiyeen Al-shabaabnimo.
Sidoo kale Taliye ku xigeenka ciidamada la dagaalanka waxa argagixisada loogu yeero John Ndungutse, ayaa sheegay in 2-da Qof ee Soomaalida ah looga shakiyay in ay Al-shabaab ka tirsan yihiin oo ay doonayeen in ay Soomaaliya u gudbaan kadibna ka dagaal galaan waxaana uu tilmaamay in loo gudbin doono xarunta baarista argagixisada ee magaalada Kampala.
Dowlada Uganda oo qabatay Dhalinyaro Al-shabaab looga shakiyay was last modified: August 1st, 2016 by Siid Cali
Dhageyso:Mas’uuliyiin Ka tirsan KGS Oo Gaarey Degmada Tiyeeglow Ee Gobolka Bakool
Dhageyso+Daawo Sawiro:Kulankan is dhexgelka oo lagu magacdarey oo ka dhacay xarunta maamulka degmada baydhabo